Cheap SBB Train Tickets Na njem ụzọ gasị Ahịa | Save A Train
Cheap SBB Train Tickets Na njem ụzọ gasị Ahịa
Home > Cheap SBB Train Tickets Na njem ụzọ gasị Ahịa
You nwere ike ịchọta ozi niile gbasara Cheap SBB gbaa ụgbọ okporo ígwè na SBB ahịa njem na uru.
isiokwu: 1. SBB site na Isi Ihe Zụọnụ
2. Banyere SBB 3. Top Insights Inweta Cheap SBB Train Ticket
4. Ego ole ka tiketi SBB na-efu 5. Rozọ Njem: Gịnị mere o ji dị mma iji ụgbọ oloko SBB, gharakwa njem ụgbọelu
6. Kedu ihe dị iche na .kpụrụ ọkọlọtọ, Passbọchị Pass, na Supersaver na SBB 7. Enwere ndenye aha SBB?
8. Ogologo oge tupu mmalite nke SBB ịbịarute 9. Kedu ihe bụ usoro ọzụzụ ụgbọ oloko SBB
10. Kedu ọdụ ụgbọ oloko nke SBB na-eje ozi 11. SBB AJQJ.
SBB site na Isi Ihe Zụọnụ
The Switzerland Federal Railways, SBB, bụ ụlọ ọrụ ụgbọ oloko mba nke na-arụ ọrụ na Switzerland.
SBB ụgbọ oloko na-họọrọ na n'elu nke mba okporo ígwè usoro na Europe, na n’ime 2017 họọrọ nke mbụ maka ogo ọrụ ya, ogo nchekwa, na ndeksi arụmọrụ.
25 nde ndị njem na-eme njem site na SBB kwa ụbọchị.
Ọrụ ụgbọ oloko SBB bụ otu n'ime ọrụ ụgbọ okporo ígwè kachasị n'oge n'ụwa, na-erughị 3 nkeji oge na nkezi.
Ogologo ụgbọ oloko SBB kachasị ogologo, Ọwara Gotthard Base, na Swiss Alps, nha 57.1 kilomita ma debe ndekọ ụwa.
SBB nwere 3 asụsụ obodo: German, French, na .talian. Ya mere, A na-akpọ SBB ọdụ ụgbọ oloko ma kaa ya akara dịka mpaghara ahụ si dị: aha na ihe ịrịba ama ụgbọ na obodo abụọ na-asụ asụsụ abụọ dị n’asụsụ mpaghara, na ihe mere na ị pụrụ ịhụ aha mgbe ụfọdụ dị ka nke a SBB CFF FFS.
SBB bụ ọrụ ụgbọ oloko Switzerland nke kachasị mma n'ụwa.
Swisslọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè Switzerland SBB na-arụ ọrụ na Switzerland niile, na 798 n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè, na 721 gbaa ụgbọ okporo ígwè tiketi nke ire ere. Blọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè SBB bụ nke ndị nwe obodo kemgbe Jenụwarị 1st, 1999, nke pụtara na gọọmentị etiti ejide 100% nke mbak.
gaa Chekwaa Homepage Train ma ọ bụ jiri wijetị a chọọ na-azụ tiketi maka SBB
Top Insights Inweta Cheap SBB Train Ticket
Number 1: Inweta gị SBB tiketi tupu dị ka ị nwere ike
SBB gbaa ụgbọ okporo ígwè dị na ntanetị ruo 60 ụbọchị tupu ụbọchị njem gị. Mgbe ị ịtụ ụgbọ oloko tupu oge eruo, ị na-enweta ndị dị ọnụ ala tiketi na ndị dị ọnụ ala SBB gbaa ụgbọ okporo ígwè na-dị nnọọ ụkọ. Ọzọkwa, SBB gbaa ụgbọ oloko rịa rịa ka ụbọchị njem gị na-eru nso, ya mere iji azọpụta ego na gị SBB ụgbọ okporo ígwè ịzụta, na-azụ ụgbọ okporo ígwè gị tupu oge eruo. Iji chekwaa ego na tiketi ụgbọ oloko SBB, zụta tiketi gị n'isi.
Number 2: Njem site na SBB n'oge oge kachasị elu
SBB gbaa ụgbọ oloko na- dị ọnụ ala karịa na oge apụ-elu, na mmalite nke izu, ye ke uwemeyo. Can nwere ike ijide n'aka na ị ga-enweta ọnụ ala gbaa ụgbọ okporo ígwè n'ime izu. Na tusde, Wenezde, na Tọzdee, SBB gbaa ụgbọ okporo ígwè bụ ndị kasị echekwa. N'ihi na olu nke azụmahịa njem na-aga ọrụ n’ụtụtụ na anyasị, Tiketi ụgbọ oloko na-efu ihe. N'ihi ya, ọ dị ọnụ ala karịa njem oge ọ bụla n'etiti ehihie na mgbede. Oge ngwụsị izu bụ oge ọzọ kachasị elu maka ụgbọ oloko, tumadi na Fraịdee na Satọde. Ọnụ ego ụgbọ oloko SBB na-arịkwa elu ezumike ọha na eze na ezumike ụlọ akwụkwọ.
Number 3: Nye tiketi gị maka SBB mgbe ị ji n'aka usoro njem gị
SBB ụgbọ oloko na-achọsi ike, na naanị 2 ụlọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè ndị ọzọ dị ka asọmpi, ha ugbu a-anọgide n'elu oke maka ụgbọ oloko na Switzerland. Ha ga - enwe ike ịbanye ihe mgbochi ụgbọ oloko dịka nke ha nwere nke machibidoro ịgbanweta ma ọ bụ nkwụghachi tiketi ọ gwụla ma ọ bụ ụdị tiketi ọ bụla.. N’agbanyeghi na enwere webusaiti ebe ighara ire ndi mmadu tiketi gi, SBB anaghị ekwe ka ere ahịa tiketi nke abụọ. Kedu otu esi enyere gị aka ịchekwa ego? Nye iwu tiketi gị naanị mgbe ị ji n'aka na usoro oge ị ga --echebe gị ịmebe otu tiketi ugboro abụọ n'ihi na ihe bịara na ịnweghị ike iji tiketi mbụ..
Number 4: Zụta gị SBB tiketi na Save A Train
Chekwaa Tragbọ oloko nwere nke kasịnụ, nke kacha mma, na nkwekọrịta dị ọnụ ala maka tiketi ụgbọ oloko na Europe. Njikọ anyị na ọtụtụ ndị na-anya ụgbọ okporo ígwè, isi mmalite ụgbọ oloko, na ihe omuma anyi banyere algorithms nke teknụzụ na-enye anyị ohere ịre azụ tiketi ụgbọ ala kachasị ọnụ. Anyị na-adịghị nnọọ na-enye ọnụ ala ụgbọ okporo ígwè tiketi amụọ maka SBB naanị; anyị na-enye otu ihe ahụ maka ihe ndị ọzọ na SBB.
Lyon ka Basel Zụọ Ahịa
Zurich na Basel Zụọ Ahịa
Paris na Basel Zụọ Ahịa
Lucerne na Basel Zụọ Ahịa
Ego ole ka tiketi SBB na-efu?
Tiketi SBB na-amalite site na € 12.50 ruo dị ka € 125 maka otu njem ụgbọ oloko. The ọnụahịa nke tiketi ụgbọ oloko SBB dabere na ụdị tiketi, ebe, na mgbe ịhọrọ njem:
Ọkọlọtọ € 12.50 – € 35 € 28 – € 55
Klaasị mbụ € 50 – € 95 € 50 – € 125
Rozọ Njem: Gịnị mere o ji dị mma iji ụgbọ oloko SBB, gharakwa njem ụgbọelu
1) Ar na-abịarute na Obodo Obodo. Nke a bụ otu uru ụgbọ oloko SBB ma e jiri ya tụnyere ụgbọ elu. SBB ụgbọ oloko na niile ụgbọ okporo ígwè ndị ọzọ site na ebe obula n’ime obodo ruo n’etiti obodo ozo, adịghị mkpa ma ọ bụrụ na ọ bụ a ihe ndozi ma ọ bụ obodo. Ọ na-azọpụta gị oge na ọnụ ahịa nke cab si ọdụ ụgbọ elu na etiti obodo. Na ụgbọ oloko na-akwụsị, ọ dị mfe ịnweta ebe ọ bụla n'obodo ị na-aga. Ọ baghị uru ebe ị na-esi, Geneva, Basel, Zermatt, ma ọ bụ Zurich, etiti obodo na-akwụsị bụ isi uru nke ụgbọ oloko SBB!
2) Njem nke ụgbọ elu chọrọ ka ị nọrọ ọdụ ụgbọ elu ọ dịkarịa ala ọtụtụ awa tupu oge ụgbọ elu gị. Ga- enyeriri nyocha ego tupu ekwere gị ịbanye n'ụgbọelu. Na ụgbọ oloko SBB, naanị ị ga-anọ n'ọdụ ụgbọ ahụ ihe na-erughị otu awa tupu oge eruo na mgbe ụfọdụ ọbụlagodi obere. Mgbe ị tụlere oge ọ ga-ewe gị iji si ọdụ ụgbọ elu gaa etiti obodo ahụ, ị ga-achọpụta na ụgbọ oloko SBB ka mma maka mkpokọta njem oge.
3) N'elu elu, na price nke SBB ụgbọ okporo ígwè tiketi yiri ka ihe dị oké ọnụ karịa mmefu ego ikuku tiketi. Otú ọ dị, mgbe ị tụlere ebubo niile metụtara ya, SBB gbaa ụgbọ okporo ígwè nwere ọnụahịa ka mma. Na ụgwọ ndị ọzọ dịka ụgwọ akpa ị na-agaghị akwụ ụgwọ n'ụgbọ oloko, na-ejegharị site na SBB kacha mma.
4) Gbọ oloko na-environmentally friendly. Na ntụnyere n'etiti ụgbọ oloko na ụgbọ elu, ụgbọ oloko na-apụta mgbe niile. Gbọ elu elu carbon dị elu na co2 ha na-apụ na-emerụ ụwa kpamkpam. Tragbọ oloko na tụnyere iji obere akara ụkwụ Carbon karịa ụgbọ elu.
Chur na Siresị Ahịa Ahịa
Zurich ka Chur Zụọ Ahịa
Geneva na Chur Train Prices
Kedu ihe dị iche na .kpụrụ ọkọlọtọ, Passbọchị Pass, Nchekwa Day Pass, na Supersaver na SBB?
SBB nwere ụdị tiketi dị iche iche maka mmefu ego dị iche iche na ụdị ndị njem: ma ọ bụ azụmahịa ma ọ bụ oge ntụrụndụ. Nwere ike ijide n’aka na otu n’ime tiketi ndị a ga-abara gị uru.
Standard SBB Tiketi:
The SBB Standard tiketi bụ kacha mgbanwe niile SBB tiketi. Nke a ụgbọ okporo ígwè tiketi bụ maka mgbe na-ebe 1 ụzọ ma ọ bụ gburugburu. Yabụ, na SBB ọkọlọtọ tiketi bụ kpochapụwo njem. Ọtụtụ ihe, nke a ụgbọ okporo ígwè tiketi dị irè maka ụbọchị dum ị họọrọ n'oge ịzụta, ruokwa mgbe 5 m bụ ụbọchị na-esote. Na mgbakwunye, can nwere ike ịzụta tiketi tiketi SBB maka klas nke 1 na nke 2. Nnukwu uru ọzọ nke tiketi ahụ na-atụ bụ na ụmụaka ruo mgbe ha ruru afọ 6 njem njem n'efu. Yabụ, ị nwere ike ịga njem ebe ọ bụla ịchọrọ ma na klaasị ọ bụla, na njem gị site A ruo B.
SBB Day Pass na nchekwa ụbọchị ngafe Tiketi:
Na kaadị njem nchekwa ụbọchị nchekwa, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ dị ka as 27 kwa njem. Tiketi Day Pass dị naanị ma ọ bụrụ na ị nweta ha tupu oge eruo, ha adịghị na ọdụ ụgbọ oloko, dị ka n'oge dị 60 ụbọchị tupu ụbọchị ọpụpụ gị. I nwekwara ike ịtụ ụdị a ụgbọ okporo ígwè tiketi a ụbọchị tupu njem. Ọzọkwa, tiketi Saver Day Pass dị irè maka ụgbọ mmiri, ụgbọ ala, ma ọ bụ tram njem.
Klas tiketi a adịghị agbanwe agbanwe dị ka tiketi ụgbọ oloko Standard SBB, ma dị ọnụ ala karịa ndị ọzọ ụgbọ okporo ígwè tiketi. The Supersaver SBB tiketi awade ka 70% ego na tiketi kwekọrọ. N'ụzọ dị iche na ọkọlọtọ ụgbọ okporo ígwè, ofdị tiketi a na-enye ego kacha ala na njem a kapịrị ọnụ site na A ruo B. Ọ pụtara, ị gaghị amali ma gbanye n’ọdụ ọ bụla, belụsọ n'ọdụ ndị izizi akwụkwọ.
The Day Pass card na-enye gi mgbanwe na ubochi njem. Yabụ, ị nwere ike ịga njem oge ọ bụla ịchọrọ, n'ụbọchị ọpụpụ ụbọchị.
Enwere ndenye aha SBB??
Naanị ụmụ amaala obodo nwere ike ịzụta kaadị njem GA, nke bụ ihu ọma otu kaadị maka ihe niile. Ngwaọrụ GA na-arụ ọrụ ụgbọ njem ọhaneze niile na Switzerland.
Nwere ike ịzụta ya na:
– SBB tiketi counters.
– Na ọrụ ndị ahịa SBB mpaghara 848 44 66 88
– Site na ndị ọrụ nọ n’ụgbọ oloko na ụgbọ ala SBB.
Childrenmụaka na ndị toro eto ruo mgbe ha ruru 16 na ndị mụrụ ha nwere ike ịnụ ụtọ ọnụ ala na kaadị njem Familia GA. Kaadị a dị ma ọ bụrụ na opekata mpe onye otu n’ime ndị nwere kaadị njem SBB a.
Ndị niile na - ejide Familia GA na - enwe ọnụ ahịa dị oke ọnụ maka kaadị GA ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ezinụlọ nwere ike ikpebi ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịzụta Familia GA maka klas nke mbụ ma ọ bụ nke abụọ.
Mgbe ị na- 25 ọ bụ maka inwe anụrị, ma ugbu a jiri kaadị asaa, ị nwere ike ịga njem na-akparaghị ókè site na 7 pm. Ọ pụtara, Kaadị njem a dị n'etiti 7 zuo ya 5 m. Ya mere, kedu ka o si arụ ọrụ? A na-ebugo asaa25 na kaadị njem Switzerland Pass ma ị nwere ike iji ya maka nkwụsị ọ bụla.
Basel na Ahịa ụgbọ oloko
Geneva ka Zermatt Zụọ Ahịa
Bern ka Zermatt Zụọ Ahịa
Lucerne ka Zermatt Zụọ Ahịa
Ogologo oge tupu mmalite nke SBB ịbịarute?
Inweta SBB gị ma dịrị n’oge n’oge, ụzọ ụgbọ oloko na-atụ aro ka ị rute opekata mpe 1 awa tupu ụgbọ oloko SBB gị apụ. Anyị na Save A Train ebe anyị gara ọtụtụ ụgbọ oloko SBB, kwadoro ịbịa ọbụna 30 Nkeji oge, ya mere na ọ dịghị mkpa ka i jiri ọsọ gbadaa nnukwu ọdụ ụgbọ okporo ígwè iji jide ụgbọ oloko ahụ. Na mgbakwunye, otu awa zuru ezu iji nwee obi ụtọ na ụlọ ahịa na nri nri ma nweta ihe ndị ahụ ị chọrọ maka njem ụgbọ oloko ka ọ bụrụ nke ọma.
Kedu ihe bụ usoro ọzụzụ ụgbọ oloko SBB?
Can nwere ike ịchọpụta na ezigbo oge na mbido ụlọ anyị na Zọpụta A Train. Dị pịnye ebe ị nọ ugbu a na ebe ịchọrọ ịchọrọ, anyị ga-egosikwa gị ozi emelitere maka usoro ụgbọ oloko.
Kedu ọdụ ụgbọ oloko nke SBB na-eje ozi?
Enwere gafee 10 ọdụ ụgbọ mmiri nke ndị ọrụ SBB na-arụ ọrụ.
Zlọ ọrụ Zurich nke SBB bụ ọdụ ụgbọ elu Zurich (Aha obodo bụ Zurich HB). Nke a bụ nnukwu ọdụ ụgbọ oloko SBB na Zurich ma ọ dị na etiti Zurich, nso Osimiri Limmat.
Bern bụ isi obodo Switzerland na ọdụ ụgbọ oloko kacha nso na Mahadum Bern na mpaghara Langgasse.
Na Geneva Naa SBB ụgbọ oloko pụọ ma si na Geneva Central Station, ke ufọt obio.
Basel SBB ọdụ bụ nnukwu ókè ọdụ ọdụ na Europe. Nke ahụ bụ ikwu Na Si Switzerland, ị nwere ike ịga Germany, France, Austria, na Netherlands nwere ọrụ ụgbọ oloko SBB. Ọtụtụ ihe, enwere 50 ụlọ ahịa na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ na ọdụ Basel, ebe ị nwere ike ịzụ ahịa maka ihe niile ịchọrọ maka njem a. Dị ka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịzụta nri nri na ncheta oge ikpeazụ. Site na ọdụ Basel SBB, na isi ọdụ ị nwere ike ịga njem bụ Frankfurt, Paris, na Salzburg.
Na-enye ohere ka ha dochie bọọdụ SBB insgbọ oloko?
A na-ahapụ igwe kwụ otu ebe na ụgbọ oloko SBB. Nwere ike ịzụtara ha tiketi na ọdụ, ma debanye igwe kwụ otu ebe dị ka akpa ma ọ bụ buru ha gaa ụgbọ oloko dị ka akpa aka.
Childrenmụaka Na-eme njem na SBB insgbọ oloko?
Ee n'ọnọdụ ụfọdụ, soro ụmụaka na-erubeghị afọ isii na-akwụ ụgwọ n'efu. Na mgbakwunye, frommụaka malite na afọ isii, rue ha 16 ụbọchị ọmụmụ njem maka ọkara-ego.
Na-anu ulo na-ekwe na SBB insgbọ oloko?
Ee, a na-ahapụ ndị nkịta ma ọ bụrụhaala na ha na-eji ụgbọ ibu ma ọ bụ akpa ibu.
Kedu usoro ịbanye na SBB?
Ikwesiri iru ebe ahu ma odimma 1 awa tupu ụgbọ oloko gị apụ, ma gosi njirimara na onye nyocha tiketi iji nyochaa.
Kasị arịọ SBB FAQ – Enwere m ike idowe oche tupu oge eruo na SBB?
ị nwere ike idobere na ụgbọ oloko ahụ a ama mna n'ọdịnihu maka ruo 5 ndị njem na ọnụahịa nke € 5 kwa oche. Otú ọ dị, ndoputa aghaghi idi n'okpuru aha onye njem.
Enwere ọrụ Wi-Fi n'ime SBB?
Ee. Can nwere ike ịnụ ụtọ Free Wi-Fi ọrụ na SBB ụgbọ oloko niile na njem niile na njem maka 60 nkeji.
Ọ bụrụ n’ị gụrụ ebe a, ị maara ihe niile ị chọrọ ịma banyere gị SBB ụgbọ oloko na-adị njikere ịzụta gị SBB ụgbọ okporo ígwè tiketi on Save A Train.
You choro itinye peeji a na saiti gi? Pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-sbb%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro), Ma ọ bụ ị nwere ike ị jikọtara ọnụ ugbu a na ibe a.